IMezcal vs.Tequila: Umahluko o-7 wokwazi - Malunga Cocktails
IMezcal vs.Tequila: Umahluko o-7 wokwazi
Uninzi lwabantu aluqondi umohluko kwi-mezcal vs tequila. Zombini ziyimveliso zaseMexico kwaye zenziwe zavela kwi-agave, kwaye zihlala zisetyenziswa ngokungafaniyo kwii-cocktails ezithandwayo ezinje ngemargarita okanye paloma. Nangona kunjalo, kukho ukungafani phakathi kwe-mezcal kunye ne-tequila ngokunjalo, njengommandla apho ziveliswa khona, ukuba zenziwe njani kwaye zahlulwa njani, kwaye zinambitha njani.
IMezcal vs Tequila -Ukufana kunye nokwahluka
Ishati elandelayo ibonisa ukufana kunye nokwahlukana phakathi kwe-mezcal kunye ne-tequila ngokukhangela.
I-19 yeeTequila ezimnandi kakhulu kuyo nayiphi na indlela oyisela ngayo
Uluhlu lweeCocktails ezidumileyo
Iziselo ezithandwayo zeCointreau
Ukuqonda umahluko phakathi kweMezcal kunye neTequila
Ishati engentla inikezela ngokukhawuleza, kuluhlu lokujonga umahluko. Umahluko ophambili ubandakanya oku kulandelayo.
1. I-Tequila yi-Mezcal, kodwa i-Mezcal ayisoloko i-Tequila
Zonkeitequilayi-mezcal, kodwa ayizizo zonke i-mezcal tequila. I-Tequila luhlobo lwe-mezcal eyenziwe ngolunye uhlobo lwe-agave ekhutshwe ngokweenkqubo ezithile kwilizwe laseJalisco.
2. Apho ziveliswa khona zahlukile
Kukho ukungqubana phakathi kwe-tequila kunye ne-mezcal ukuya kuthi ga apho ziveliswa khona eMexico. Nangona kunjalo, indawo yemveliso yahlukile phakathi kwezi zimbini.
Phantse yonke i-tequila ivela eJalisco.
I-Tequila inokuveliswa kwezinye iindawo zamanye amazwe aseMexico, ngokunjalo: iGuanajuato, Michoacán, Nayarit, kunye neTamaulipas.
I-Mezcal inokuveliswa eJalisco, kodwa iveliswa ikakhulu kwezinye izizwe ezisithoba: iDurango, iGuanajuato, iMichoacán, iOaxaca, iPuebla, iSan Luis Potosi, iTamaulipas kunye neZacatecas.
3. Basebenzisa iindidi ngeendidi zeAgave
Ngelixa zombini i-tequila kunye ne-mezcal ziveliswa entliziyweni ye-agave eyaziwa njenge-piña (eguqulela kwipinapple), i-tequila iveliswa kuphela kwi-agave ye-weber eluhlaza, ngelixa i-mezcal inokwenziwa kwenye yeentlobo ze-agave ezibandakanya i-blue Weber kunye nezinye ezininzi. .
ungathi hayi ukuya kumhla
4. I-Agave iphekwe ngokwahlukileyo
Ngelixa zombini i-tequila kunye ne-mezcal zenziwe entliziyweni yesityalo se-agave, indlela ezenziwa ngayo iyahluka. I-Agave kufuneka iphekwe ukuze yenze iswekile ene-fermentable eyimfuneko yokwenza utywala, kodwa indlela efezekiswa ngayo yahluke ngokucacileyo phakathi kwe-tequila kunye ne-mezcal. Kwi-mezcal, i-agave yosiwe kwimingxunya yodongwe enamatye e-lava, ngelixa ikwi-tequila iyabiliswa kwi-oveni ngaphezulu komhlaba.
5. I-Distillation yahlukile
Ngokubanzi, i-tequila iphindwe kabini okanye kathathu ikhutshwe ngeebhotile zobhedu. I-Mezcal ihlala ikhutshiwe kwiimbiza zodongwe.
6. Iiprofayili zeFlavour zahlukile
Umahluko kwi-agave esetyenzisiweyo, ukupheka, kunye ne-distillation zonke zikhokelela kwiiprofayili ezahlukeneyo zokunambitheka phakathi kwe-tequila kunye ne-mezcal. Ngokubanzi, i-tequila ithande ukuba mnandi, inzima, ibe nesiqhamo, kwaye ibe yinto encinci yokuguga kwe-oki. Kwelinye icala, i-mezcal ithanda ukutshaya, umhlaba, kwaye inencasa xa ithelekiswa ne-tequila, kwaye ine-funky encinci (ngendlela elungileyo) incasa kunye nemifuno yemifuno, yeentyatyambo, kunye / okanye yetropiki.
7. Zineendidi ezahlukeneyo noHlelo
I-Tequila kunye ne-mezcal ziyafana kuba zozibini zahlulwe ngokobudala, kwaye amagama eendibano ayafana.
Ukhulile nge Mezcal Tequila
Ngaba ukukhwehlela kwekennel kuyahamba ngokwakho
imibuzo engathandekiyo yokubuza abahlobo bakho
Iinyanga ezi-2-11 Ukuphumla Ukuphumla
Iminyaka 1-2 Endala Endala
3+ iminyaka Ukhulile Ukhulile
I-Mezcal iza ngeendlela ezahlukeneyo ngokusekwe kwindlela eyenziwe ngayo (xa kuthelekiswa nendlela emdala ngayo). Ezi ndlela zichazwa ngumthetho kwaye zibandakanyiwe kwileyibhile. Izitayile ezahlukeneyo ze-mezcal zibandakanya:
I-Mezcal -I-mezcal yemizi-mveliso isebenzisa izixhobo zangoku kunye neenkqubo zokucoca ulwelo
I-Mezcal Artesenal -I-Mezcal eyenziwe kwingingqi ethile isebenzisa iinkqubo ezithile zobugcisa
I-Mezcal Ancestral - I-Mezcal ivelise kusetyenziswa iinkqubo zesiko ezinje ngokugoba kwi-oveni yomngxunya kunye nokubila kwizinto zemveli ezinje ngeembiza zodongwe okanye iziqu zemithi ezigingxiweyo; Ukulungiswa kwezinyanya kufuneka kubandakanye imicu yemaguey (eyilungu losapho lwe-agave)
I-Tequila inokuthi ibhalwe ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo, i-mixto kunye ne-100% ye-agave. I-Mixto tequila inombala okanye incasa yongezwa kwaye inokuthi ibhalwe njenge:
Umahluko weTequila kunye neMezcal
Ngelixa abantu abaninzi besebenzisa i-tequila kunye ne-mezcal ngokungafaniyo kwii-cocktails, kukho ubuqili kunye nokungafani okukhulu phakathi kwezi zimbini. Eyona ndlela yokuqonda ukuba lo mahluko uyichaphazela njani incasa yomoya obangelwayo kukuzama iintlobo ezahlukeneyo nganye nganye.
Ezemidlalo Nokuqina Uhlahlo Lwabiwo-Mali Iqela Imiboniso Yeslides Isitshayina Astrology Malunga Iimpawu
Ndinetyala elingakanani kwinkxaso yomntwana
ukuba mawuthini xa kusweleke ilungu losapho lomntu
Ingoma yokulahlekelwa ngumntu ngenxa yomhlaza
ungayicoca njani igrabile yetanki lentlanzi ngaphandle kwesithuba